nepali janta | नेपाली जनता :: Nepali Janta: | Page 241
मतदान केन्द्र नजिक भएको विस्फोटमा परि २२ को मृत्यु,२८ घाइते
पाकिस्तान । पाकिस्तानमा राष्ट्रिय र प्रदेशीय मतदान जारी रहँदा क्वेटाको मतदान केन्द्र नजिकै भएको विस्फोटमा परि २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना घाइते भएका छन् ।
विस्फोट पूर्वी बाइपास नजिकै बनाइएको मतदान केन्द्र आसपास भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले…
१६ नेपाली नारीको उद्दार
काठमाडौं । दिल्ली महिला आयोगको टोलीले मंगलबार मध्यरातमा १६ नेपाली महिलाको ‘उद्दार’ गरेको जनाएको छ। मानव तस्करले कुवेत र इराक पठाउन लगेका ती महिलालाई दिल्लीको मुनिर्का क्षेत्रको एउटा सानो कोठाबाट ‘उद्दार’ गरिएको दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्ष स्वाती मालिवालले ट्वीटरमार्फत् जानकारी…
किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिए
काठमाडौं । किसानको खेतबाट २० रुपैयाँमा किनिएको तरकारी आम उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा ८५ देखि एक सय रुपैयाँ सम्म महंगिने गरेको छ । यसैले पनि प्रष्ट गर्छ तरकारीमा विचौलियाको भूमिका । तर पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन बसे पछि…
केसीको माग सम्बोधन नभएको कारण राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
काङ्ग्रेसले डाक्टर केसीले उठाएको माग सम्बोधन गरी जीवन रक्षा गर्नुपर्ने, तरुण दलको प्रर्दशनमा भएको प्रहरी धरपकडबारे गृहमन्त्रीको जवाफ र बंगलादेशमा…
भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको अबैध सामान प्रहरीको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले आज बिहान भारतबाट भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ हल्दुखाल क्षेत्रबाट लुकिछिपी ल्याउँदै गरेको रु एक लाख ८४ हजार बराबरको महिलाले लगाउने १५४ थान…
पाकिस्तानमा आज निर्वाचन
काठमाडौं । पाकिस्तानमा बुधबार आम निर्वाचनको मतदान सुरु भएको छ । यो पटकको निर्वाचनमा पूर्व क्रिकेटर इमरान खान र हाल कैदी जीवन बिताइरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पार्टीबीच तिव्र प्रतिष्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल सत्ता सञ्चालनमा नै रहेका…
रुँदै राजीनामा दिए कानुनमन्त्रीले
काठमाडौं । कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि तामाङले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजीनामा घोषणा गर्दा तामाङ निकै भावुक भएका थिए । जनतालाई शिरमा…
२५ औ दिनमा सरकारी टोली र डा. केसी पक्षबीच वार्ता, यस्तो भयो सहमति
काठमाडौं। डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच मंगलबार साँझ भएको भेटवार्ता सकारात्मक भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा डा. केसीले उठाएको मागबारे छलफल भएपनि सहमति जुटेको छैन ।
केसी र सरकारी वार्ता टोलीले साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा. गोविन्द…
बाल यौन दुराचारमा संलग्न दुई दुई फ्रान्सेली नागरिक प्रकाउ
काठमाडौं । बाल यौन दुराचारमा संलग्न दुई फ्रान्सेली नागरिक आफ्नो मुलुक भाग्न लाग्दा समातिएका छन् । पक्राउ पर्नेमा ४२ वर्षीय क्रिस्टोफे ग्योलक्स र ३८ वर्षीय मिचेल चुपाउ छन् ।
प्रहरीले निगरानी बढाएको सूचना पाएलगत्तै उनीहरुले आफ्नो मुलुकतर्फ भाग्ने प्रयास गरेको…
यूएईमा रहेका अवैध कामदारहरु बिना जरिवाना आफ्नो देश फर्किन वा वैध बन्न सक्ने
काठमाडौं । यूएईमा लुकिछिपी वा अवैध रुपमा बसिरहेका मानिसहरू आफ्नो देश फिर्ता वा भिसा लिएर वैधानिक बन्ने अवसर दिने तयारी गरेको छ ।
इमिरेट्स आइडी अथोरिटी विभागका उच्च अधिकारी ब्रिगेडिएर साहिदले जुलाई २३ तारिखमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिएका…